Muxuu ka dhignaa goolkii uu xalay Cristiano Ronaldo ka dhaliyay naadiga Villarreal? – Gool FM
(Manchester) 24 Nof 2021. Laacibka kooxda Manchester United ayaa sidii caadada u ahayd sare usii qaaday rikoorradiisa kubadda cagta isagoo haatan taariikh kale ku sameeyay goolkii uu xalay ka dhaliyay naadiga Villarreal.
Ronaldo ayaa hoggaanka u dhiibay Man United oo marti ahayd qaybtii labaad ee ciyaartii ka tirsaneyd kulammada shanaad ee wareegga guruubyada tartanka Champions League taasoo ay kooxdiisa ku adkaatay 2-0 xilli goolkii labaad uu raacsaday Jadon Sancho oo shabaqa taabsiiyay goolkiisii ugu horreeyay ee Red Devils.
Sidaas darteed, goolkii uu dhaliyay kabtanka xulka qaranka Portugal ayaa ahaa goolkiisii 800-aad ee xirfaddiisa kubadda cagta marka la isku daro heer naadi iyo heer qaranba sida ay qabto Jariiradda Marca, sidoo kale goolkaas ayaa ahaa midkii 140-aad ee uu ka dhaliyo tartanka Champions League.
Si kastaba ha ahaatee, shan ka mid ah goolasha xirfaddiisa guud waxa uu u dhaliyay naadiga Sporting CP, 128 waxa uu u dhaliyay Manchester United, 451 ayuu u dhaliyay Real Madrid, 101 gool ayuu u dhaliyay Juventus halka 116 gool uu u dhaliyay qarankiisa Portugal.
Marka laga soo tago Jariiradda Marca ee dalka Spain oo shaacisay in Ronaldo uu gaaray xalay goolkiisii 800-aad ee xul iyo kooxba haddana Wargeysyada kale gaar ahaan kuwa Ingiriiska waxa ay warinayaa in Ronaldo uu haatan marayo 799 gool, isla markaana uu hal gool kale u baahan yahay si uu u gaaro 800 oo gool.
Horudhac: Manchester City vs Paris Saint-Germain... (Natiijada ay marti-geliyaasha u baahan yihiin si ay usoo baxaan, rikoorka Messi uu ka heysto Man City & Sergio Ramos oo...)